रोचक – Ranga Pati
2021, July 30, Friday
सडक निर्माणको भुक्तानी बिल पास गरिदिन उपभोक्ता समितिसँग मागेका थिए घुस सडक निर्माणको बिल पास गरिदिने नाममा उपभोक्ता समितिसँग घुस खाने जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी रंगेहात पक्राउ परेका छन् । केसीलाई उपभोक्ता समितिसँग लिएको आठ लाख घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतको टोलीले शुक्रबार वीरेन्द्रनगर–७ कटकुवाबाट पक्राउ गरेको हो । अध्यक्ष केसीसँगै गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा […]
Posted on January 25, 2020 Author rangapati Comment(0)
ठूला ओहोदाका भ्र’ष्टाचारीमाथि ५ वर्ष कटेपछि मु’द्दा चलाउन नपाइने, सानालाई जिन्दगीभर ! प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे, नेताकार्यकर्ता दंग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्र’ष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भन्दै आएका छन् । तर, उनै प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका दुईवटा ऐनका संशोधन प्रस्तावमा ठूला भ्र’ष्टाचारजन्य क’सुरमाथि हदम्याद तोकिएको छ । साविकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबै तहका भ्र’ष्ट नेता एवं कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेका दुई विधेयकमा […]
पत्रपत्रिका मनोरञ्जन रोचक
महिनाबारी हुँदा भाईलाई टिका लगाई दिंए, छोइछाइ चलन आफैं तोडेँ :अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का पहिलो महिनावारी बार्न सात दिन आफ्नो मामाघर गएर बसिन्। त्यो बेला उनी पन्ध्र वर्षकी थिइन्। मामाघरमा आफ्नै उमेरकी बहिनीसँग खेल्न पाउने कुराले निकै खुसी थिइन्। वास्तविकता भने उनको सोचभन्दा तितो थियो। उनलाई कोठामा कसैलाई छुन नपाउने सर्तमा एक्लै थुनेर राखियो। घरपरिवारबाट महिनावारीबारे ज्ञान नपाए पनि स्वस्तिमा साथीहरूका अनुभवबाट सचेत थिइन्। उनलाई महिनावारी […]
Posted on December 23, 2019 December 23, 2019 Author rangapati Comment(0)
धन कमाउन मलेसिया गएका रोल्पाका एक युवा यसरि रातो बाकसमा फर्किए [भिडियो] !
नियतिले भनौ वा भाग्यले भनौ नेपाली युवाहरुलाई परदेश पस्नै पर्ने छ । लाखौ युवाहरु यतिखेर सपनाको सहर खोज्दै काठमान्डौको अन्तरराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा लाईन लागेका छन् । त्यहि एउटा बाटो भएर आउने जानेहरुको घुईचो छ । अलिकति आशा, अलिधेरै भावना बोकेर खाडी मुलुक उड्ने युवाहरुको ताँती छ । यस्तै ताँतीलाई पछ्याएर सपनाको सहर खोज्दै २० अक्टोबर […]
Posted on December 22, 2019 Author rangapati Comment(0)
रन्जना मैनालीको आमा आइन मिडियामा, भन्छिन – अदालतले छोडेपछि छोरीलाई सम्धीले घर लान्छन होला भन्ने लागेको थियो (पुरा भिडियो)
चितवन । श्रीमानलाई आ त्मह त्या गर्न दु रु त्साहन गरेको अ भि योगमा थुनामा रहेको रन्जना मैनाली एक लाख धरौटीमा छुटेसंगै पहिलो पटक मिडियामा आएकी छन् । रञ्जनालाई धरौटीमा रि हा गरेपछि रविका परिवार अहिले आ क्रो शि त भएका बेला रन्जनाले भने रवीका परिवारलाई उल्टै आ रोप लगाएकी छन् । रन्जनाका अनुसार विवाह […]
Posted on December 22, 2019 December 22, 2019 Author rangapati Comment(0)
पुर्वयुवराज पारसले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा राखे सोनिकाको तस्विर, समर्थकले भने- ‘घृ’णा गर्छु’
काठमाडौँ’ ५ पुस । पुर्व राजकुमार पारस शाह र युत्युवर सोनीका रोकायाको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला पारस स्वयंले सामाजिक संजाल फेसबुकको प्रोफाइलमा सोनीकासँगको तस्विर राखेपछि उनि झनै विवादित बनेका छन् । उनको त्यो प्रोफाइललाई लिएर उनका कट्टर समर्थकहरु समेत निराश भएका छन् । पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाहका पति समेत रहेका उनले यस्तो […]
Posted on December 21, 2019 Author rangapati Comment(0)
Posted on December 17, 2019 December 17, 2019 Author rangapati Comment(0)
विप्लबले भने ‘महरा प्रकरण ओली र दाहालको चालबाजी हो’
काठमान्डौ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणबारे नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लब’ले आफ्नो धारणा सार्बजानिक गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्व रहेको पार्टीको छैटौ पुनर्गठन दिबशको अबसरमा नेकपाको मुखपत्र रातो खबरलाई अन्तर्वार्ता दिंदै महरा प्रकरणबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् । महरा काण्ड अलि फरक र संवेदनशील बिषय भएको विप्लबले बताएका छन् । महरा मामिला केवल नैतिक […]
Posted on December 11, 2019 Author rangapati Comment(0)
गरिखाने ठाउँ नै भएन भने भोको पेटले कसरी समृद्धिको गन्तव्य चुम्न सक्छ ?
राम्राे सपना कसलाई मन पर्दैन र । सपनामा देखेकाे राम्रा कुरा हामी अधिकांशलाई सुनाउछाैं । तर देशका लागि देखेकाे सपना सबैलाई बाँड्नु अन्यथा हाेइन । सपनालाई अझ विपनामा भाेग्न, देख्न र अनुभव गर्न चाहना सबैले राखेकै हुन्छन् । सपना सपनै नहाेस् भन्ने चाहना हुन्छ । वर्षौंदेखि निराशै निराशाबीच बाँचिरहेका हामी नेपालीका सपना औधी मन पर्छ […]
Posted on December 2, 2019 Author rangapati Comment(0)
धरानको विभिन्न ठाउँमा ब’म बि’स्पोट
मंसिर १४ धरान । धरान स्थित ठिङ्गावारी लगायत विभिन्न स्थानमा उपनिर्वाचनको पुर्वसंन्ध्या शुक्रवार मध्यराती शृङ्खलाबद्ध ब’म वि’स्फोट भएका छन । ४-५ वटा शक्तिसाली ब’म लगातार वि’स्फोट भएका हुन । प्रहरिले बि’स्फोटका घटनालाइ लुकाउन प्रयत्न गरेपनी स्थानियका अनुसार शाक्तिशाली ब’म बि’स्फोट भएको जनाइएको छ । सन्तोस चौहानको घर नजिक ब’म विस्फो’ट भएको बताइएको छ । बिस्फो’टबाट […]
Posted on November 30, 2019 Author rangapati Comment(0)
सन्त कुमार घर्ति मगरको संगीतमा ‘तिमीलाई माया गर्छु’ सार्बजनिक
उपराष्ट्रपति पुन नेपालमै बनेको पानीजहाज ‘क्रुज’मा सरर
चालकको लापरबाहीले रोल्पाका मनसुरको ज्यान गयो (भिडियो)
2019 rangapati.com | All Rights Reserved. | NewsPortal By Sathi - Tech.